OWAYENGUMSAKAZI womsakazo Ukhozi FM, uNgizwe Mchunu ngesikhathi evele enkantolo yeMantshi eRandburg nalapho enikwe khona ibheyile kaR2 000 Isithombe: Itumeleng English/African News Agency(ANA)
Mcebo Mpungose | July 29, 2021
UHLULEKE ukuzibamba kwashoda izihlangu zokuthi agiye owayengumsakazi woKhozi FM inkantolo yemantshi eRandburg, eGoli, inquma ukumdedela ngebheyili kaR2 000.
Ngemuva kwesinqumo senkantolo, uNgizwe uzwakale etshela abezindaba ukuthi ujabule kakhulu ngoba “kwenzeke ubulungiswa.”
UNgizwe usolwa ngecala lokubhebhethekisa udlame emphakathini ngezinkulumo zakhe ezinkundleni zokuxhumana. Usolwa ngokuba ngomunye wobhongoza ekuphehleni udweshu oluholele ekutheni kutatshwe impahla kushiswe nezitolo emasontweni amabili edlule. Uphinde asolwe ngokuphula imigomo yeCovid-19.
Ngesikhathi benza izethulo ngokuthi kungani bengafuni athole ibheyili uNgizwe, abashushisi badlale ama-video amane abebezama kuwo ukuvezela inkantolo ubufakazi bokuthi uNgizwe wenza izinkulumo ezabhebhethekisa udlame emphakathini. Usolwa ngokuba ngomunye wobhongoza ekuphehleni udweshu oluholele ekutheni kutatshwe impahla kushiswe nezitolo.
IMantshi uGayle Pretorius ithe uMbuso uhluleke wancama ukuhlanganisa uNgizwe nezibhelu zaseKZN naseGauteng.
“Inkantolo isebenza ngobufakazi neqiniso elibekwa phambi kwayo, hhayi imizwa nepolitiki,” kusho uPretorius.
Abashushisi baphinde bazisa imantshi ukuthi esinye isizathu sesifiso sabo sokuthi anqatshelwe ibheyili uNgizwe ukuthi angase abalaleke ngoba uyakwazi ukuhambela amanye amazwe.
UNgizwe uvezele inkantolo ukuthi ngeke alifulathele elakuleli ngoba uyalithanda leli lizwe futhi ngeke ashiye amakhosikazi nezingane zakhe. Uthe kuyimanje izincwadi zakhe ezigunyaza ukuthi akwazi ukuhambela amanye amazwe zisemaphoyiseni.
UPretorius uthe unelisekile ngalokhu futhi unelisekile nangekheli elinikezwe wuNgizwe.
Ibheyili kaNgizwe ihambe nemibandela yokuthi angazethuli izinkulumo kubantu emphakathini nokuthi aqaphele akubhala ezinkundleni zokuxhumana. Akavumelekile ukuphuma eThekwini ngaphandle uma eya ecaleni futhi akavumelekile ukutholakala phakathi kwabantu abaningi noma ukuhlela imicimbi.